Ikhabhinethi Jikelele - I-Airbnb
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uGary iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ikhabhathi yethu entle yiplani yomgangatho ovulekileyo. Iyakwazi ukulala i-4 ukuya ku-5 ngokukhululeka okanye ngaphezulu xa ifuneka. Inendawo ephakamileyo enezitephusi. Umgangatho ongezantsi ligumbi elivulekileyo elinebhedi ephindwe kabini, itafile kunye nezitulo, ikhitshi eligcweleyo kunye negumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawa. Kwigumbi eliphezulu kukho enye ibhedi egcweleyo kunye nomatrasi omnye phantsi.
Sisakhiwo esinye esithokomeleyo esineveranda engaphambili ngaphaya kwalo lonke icala elingaphambili. Ikhitshi eligcweleyo, elinefriji, isitovu/ioveni kunye nemicrowave, iwasha kunye nesomisi kwikhabhathi, igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawa. Kumgangatho ongezantsi kukho ibhedi egcweleyo kwaye kwigumbi eliphezulu linebhedi egcweleyo kunye nomatrasi omnye phantsi.
4.58 · Izimvo eziyi-147
Abanini bahlala kwipropathi enye kwindlu ngaphambili. Abamelwane kumacala omabini kunye nezinye iikhabhini kwipropathi enye. Indawo ezolileyo ubukhulu becala. Imakethi yegrosari ivaliwe, isikhululo segesi, iindawo zokutyela ezimbalwa (ukutya okukhawulezayo kunye nokutya kwaselwandle kweCajun, iMexican njlnjl), uMlambo umgama oziikhilomitha ukusuka kwipropathi kunye neLake elingekude. Kukho indawo yokuzivocavoca (ngaliphi na ixesha lokuqina) emlanjeni kunye nezinye iivenkile ezincinci kwindawo enye.
Sihlala kwipropathi kwaye sinokubona iindwendwe rhoqo. Siza kujonga nje ipropathi ukuze siqinisekise ukuba yonke into ilungile. Ukuba iindwendwe zidinga uncedo siya kuba kufutshane ukuze sincede. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwi-cabin ukuze zingene kwaye ziphume ngokukhululekileyo.
Sihlala kwipropathi kwaye sinokubona iindwendwe rhoqo. Siza kujonga nje ipropathi ukuze siqinisekise ukuba yonke into ilungile. Ukuba iindwendwe zidinga uncedo siya kuba kufutshane…